भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा ब्युँतियो स्वप्न बगैंचा – indepth.com.np
३२ असार २०७५, सोमबार २१:२०
१० वर्षपछि पुनर्जीवन दिइएको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालस्थित स्वप्न बगैंचा सोमबार उद्घाटन गरिँदै ।
भक्तपुर । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालस्थित स्वप्न बगैंचाले दस वर्षपछि पुनर्जीवन पाएको छ । सन् २००८ मा निर्माण गरिएर खण्डहरमा परिणत भएको स्वप्न बगैंचालाई मर्मतसम्भार गरेर सोमबार पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले करिब तीस लाख रुपैयाँ खर्च गरेर स्वप्न बगैंचालाई पुनर्जीवन दिएको छ । करिब डेढ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बगैंचामा मिनी रेस्टुरेन्टसहित सोमबार पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
नेपाल अर्बुदरोग निवारण संस्था एवं भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष दिवाकर राजकर्णिकारले सोमबार एक कार्यक्रमबीच स्वप्न बगैंचाको उद्घाटन गरेका छन् ।
अस्पतालमा उपचार गर्न आउने क्रममा पालो पर्खने बेला बिरामी तथा बिरामीका आफन्तलाई समय व्यतित गर्ने उत्कृष्ट स्थान बनाउने उद्देश्यले बगैंचालाई पुनर्जीवन दिइएको अस्पतालमा मेडिकल डाइरेक्टर प्रो.डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘उपचार गर्न आउँदा पालो पर्खने बेलामा बिरामी तथा उनका आफन्त समय व्यति तगर्न सहज बनाउने उद्देश्यले बगैंचालाई पुनर्जीवन दिएका हौं’, उनले भने, ‘बगैंचा घुम्दा बिरामीले आनन्दको महसुस गर्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।’
उनका अनुसार बगैंचासँगै चिया, कफी तथा फास्ट फुड पाइने मिनी रेस्टुरेन्टको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त रेस्टुरेन्टमा करिब ८० जनाले एकैसमयमा सेवा पाउन सक्ने प्रवन्ध मिलाइएको छ ।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार सन् २००८ मा डा. उम्मिद पुनको संयोजकत्वमा न्यूजील्याण्डका २० जना स्वयम्सेवकहरुले उक्त बगैंचा निर्माण गरेका थिए । करिब दुई लाख रुपैयाँ लागतमा बोटविरुवा रोप्नुका साथै दुईवटा आरामगृह तथा अन्य सजावटको व्यवस्था गरिएको अस्पताल प्रशासक राजाराम तजले बताउँछन् ।
न्यूजील्याण्डको सहयोगमा बगैंचा तयार भएपछि अस्पतालले मालीको व्यवस्था गरी नियमित रेखदेखको प्रवन्ध मिलाइएको थियो । पछि मालीको व्यवस्था हुन नसकेकोमात्रै होइन २०७२ सालको भूकम्पपछि बगैंचा खण्डहरमा परिणत हुन पुगेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
स्वप्न बगैंचा वि.सं. १९६१ असार १७ गते राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराले निर्माण गर्न लगाएको चन्द्रलोक अस्पतालको भवन प्रांगणमा निर्माण गरिएको हो । हालको भक्तपुर अस्पतालले यही भवनबाट आफ्नो सेवा विस्तार गरेको थियो ।
नयाँ भवन निर्माण भएपछि भक्तपुर अस्पताल व्यवस्थापनले २०५१ सालमा चन्द्रलोक अस्पताल भवन नेपाल अर्बुदरोग निवारण संस्था र सहिद स्मृति क्यान्सर केयर सेन्टरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । जसअनुसार नेपाल अर्बुदरोग निवारण संस्था र सहिद स्मृति क्यान्सर केयर सेन्टरले केही चिकित्सक तथा उपकरण जडान गरी क्यान्सर उपचार सुरु गरेको थियो । सुरुमा भक्तपुर क्यान्सर केयर सेन्टरको नाम दिइएको क्यान्सर उपचार हाल विशाल भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको रुपमा विकास भएको हो ।
त्यसैले यस स्वप्न बगैंचाको पुनर्जीवनले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको गर्विलो इतिहासलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्ने अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर प्रो.डा. श्रेष्ठ बताउँछन् ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा अहिले एकसय ५० शय्या पुगेको छ । त्यस्तै क्यान्सरका सम्पूर्ण उपचार सेवा यहाँ उपलब्ध रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
बिजुक्छेंको फोटो स्थानीय पाठ्यक्रम सन्दर्भ सामग्री !